Pedal For Education, 12 days cycling event by Devendra Basnet – Help Nepal Network
Pedal For Education, 12 days cycling event by Devendra Basnet
Home / Education Support / Pedal For Education, 12 days cycling event by Devendra Basnet
Created Date: April 15, 2021
Category: Education Support, News, Renovation & Construction, Uncategorized
देवेन्द्रका हजुरबा साइकल चढ्थे । उनका बुवा पनि साइकल चढेरै काममा सहर आउँथे । उतिखेर काठमाडौंको उत्तरपूर्वी काँठक्षेत्र आरुबारीका बासिन्दा उनका बा, हजुरबाको हरदमको साथी थियो साइकल ।
हजुरबा र बाको सिको गर्दै देवेन्द्रमान सिंह बस्न्यात पनि साइकलसँग जोडिए । उनले सानैमा साइकल सिके । बेला–मौकामा साइकल कुदाउन थाले । त्यति बेला बालाघर थियो बौद्धमा । जहाँ मोहर (५० पैसा) घण्टा साइकल भाडामा लिएर दौडाउँथे । एक मोहरमा भाडा लिएको साइकल मनग्यै घुमाउँथे ।
आज उनी प्रोफेसनल साइक्लीस्टका रूपमा परिचित छन् । कहिलेकाहीँ दिनको सय किलोमिटर बढी साइकल चलाउँछन् । कहिले उपत्यकाको पूर्वी क्षेत्र त कहिले पश्चिमी, उनी र उनका साइक्लिस्ट साथीहरू साइकलमा सररर घुमिरहेका हुन्छन् ।
केही दिनअघिको एउटा भेटमा देवेन्द्र बस्न्यातले आफ्ना पुराना दिन सम्झिँदै भने, “मलाई सानैदेखि साइकलमा रुचि हो । त्यस बेला सवारी–साधनको सुविधा थिएन । आरुबारीबाट सहर आउन–जान सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम साइकल नै थियो । त्यसैले साइकलको विशेष महत्त्व थियो । कुनै काममा साइकल लिएर हिँडेपछि त्यो ठाउँ मात्रै नभएर धेरै ठाउँ पुगिन्थ्यो । धेरै ठाउँ घुमिन्थ्यो । यसरी साइकलमा लत बस्दै गयो ।”
देवेन्द्रका अनुसार उस बेला सामान किन्न सहर आउनुपर्थ्यो । असन, इन्द्रचोक, न्युरोड पुग्ने साधन थियो साइकल । साइकल चलाउन सजिलो पनि थियो । अहिलेको जस्तो जोखिम थिएन ।
साइकल चलाउन सिकेर असन, इन्द्रचोक, स्वयम्भूलगायत अनेक ठाउँको चक्कर लगाउने देवेन्द्र पछि कलेज जाँदासम्म साइकलको नै प्रयोग गर्थे । उनको साइकल यात्रा निरन्तर चलिरहेको थियो ।
तर, त्यतिखेरसम्म उनले माउन्टेन बाइक चढेका थिएनन् । विदेशी पर्यटकहरूले ल्याउने साइकल सक्नेले तीबाट किन्थे । कतिले विदेशबाटै मगाउँथे । तर, देवेन्द्र उही सामान्य साइकलमा ओहोर–दोहोर गरिरहेका थिए ।
एउटा निश्चित उमेर भएपछि देवेन्द्रको बिहे भयो । बिहे गरेर घरजम भइसकेपछिको केही समय उनले साइकल चलाएनन् । नचलाउँदा नचलाउँदै करिब १० वर्ष बित्यो !
तर, उनले साइकल नचलाएका मात्र हुन् । साइकलप्रति उनको मोह भने यथावत थियो । मोहभंग भएको थिएन । तसर्थ, साइकलसँग जोडिएका समाचारहरू उनी ‘फलो’ गरिरहेका हुन्थे ।
उनी भन्छन्, “करिब १० वर्ष साइकल चढिनँ । यद्यपि, मोह भने उस्तै थियो । साइकलले मलाई तानिरहेको थियो । एकपटक एक विदेशी बेलायतदेखि साइकल चढेरै नेपाल आएको थाहा पाएपछि म फेरि यतातिर लाग्न प्रेरित भएँ ।”
उनी कल्पना गर्थे— हामीसँग अवसर छैन । त्यसमाथि गतिलो साइकल पनि छैन । साइकल बजारमा पाइन्थेन । पाइए पनि किन्नलाई सोच्नुपर्ने अवस्था थियो ।
त्यसपछिको दिनमा नै हो, उनले राम्रो खालको माउन्टेन बाइक किनेको । त्यही समय उनले सोचेका हुन्– काठमाडौंको बढ्दो प्रदूषण घटाउन साइकल यात्राले सहयोग गर्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्छ । स्वास्थ्यका लागि साइक्लिङ फाइदाजनक हो भन्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो ।
त्यससँगै आममानिसमा साइकलप्रतिको सोचमा अभिवृद्धि गर्न पनि सडकमा साइकल निरन्तर गुड्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले देवेन्द्रलाई साइकल लिएर ठाउँ–ठाउँ पुग्न अभिप्रेरित गर्यो । अर्थात् उनी नदेखिँदो पारामा समाजसेवामा सक्रिय भए ।
माउन्टेन बाइकको प्रयोग गर्दै गएपछि साइकल चढ्ने अरूहरूसँग पनि सम्पर्क हुँदै गयो । यो सम्पर्कले उनीहरूको साइकल यात्रालाई गति दियो ।
देवेन्द्रसँग समाजसेवा र साइकलको विषय उठाउँदा उनले साइकललाई समाजसेवासँग मज्जाले फ्युजन गर्न मिल्ने बताए । उनी भन्छन्, “साइकल त अचम्मको साधन हो । यो यातायातको साधन मात्रै होइन, मनोरञ्जनको माध्यम पनि हो । साइकलको प्रयोग गरेर आन्तरिक र बाह्य पर्यटनमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुआयामिक काम गर्न सकिन्छ साइकलको प्रयोग गरेर । हेर्दा सामान्य देखिने यो दुईपांग्रे सवारी–साधन धेरै काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।”
समाजसेवाका लागि पनि साइकलको प्रयोग हुनसक्छ भन्ने यसपटकको देवेन्द्रको एकल र साहसिक साइकल यात्राले देखाइसकेको छ । एक हजार २०० किलोमिटरको साइकल यात्रा लामो मात्रै नभएर जोखिमपूर्ण पनि थियो । तर, समाजका लागि केही गर्ने उत्साह र हुटहुटीले देवेन्द्र बस्न्यातलाई दोलखादेखि दिपायलसम्म एक्लै साइकल चलाउन प्रेरित गर्यो ।
देवेन्द्रको भनाइ छ। “समाजसेवा गाह्रो काम हो । ‘सेवा गरौँ’ भन्ने भावना भित्री रूपमा जागृत भए मात्र समाजसेवामा लाग्न सकिन्छ । यो प्रेरणा आवश्यक छ । नभए सेवा गर्न सकिन्न ।”
१२ सय किलोमिटरको साइकल यात्रा सम्पन्न गरेर फर्किएका देवेन्द्र आफैँ पनि आश्चर्यचकित हुन्छन् कुनै–कुनै बेला, यति लामो साइकल यात्रा आफैँले गरेकोमा !
साइकल यात्रामा रमाउँदै हिँड्ने देवेन्द्र र उनका साथीहरूले साइकलसँग जोडिएका इभेन्टहरू गर्न थाले । उनीहरू कहिले साइकलमा लुम्बिनी पुग्थे त कहिले जनकपुर । समाजका लागि साइकलको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अभिप्ररित उनी र उनका साथीहरूको चाहना थियो, यस कार्यले नयाँ पुस्तालाई पनि साइकल यात्रासँगै समाजसेवाप्रति उत्प्रेरित गरोस् ।
यति हुँदाहुँदै पनि समाजसेवाका लागि केही दह्रो काम गर्ने समय आइसकेको थिएन, सायद । उनी समय पर्खिरहेका थिए । त्यसो त उनी विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि आफ्नो किसिमबाट खटिरहेका थिए । कहिले डा. भगवान कोइराला, कहिले डा. रामकेवल साहसँग कुरा गरेर बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग गर्दै आएका थिए । अरू सामाजिक कार्यमा पनि उनको संलग्नता रहँदै आएको थियो ।
पछिल्लो समय उनी जोडिए परोपकारी संस्था हेल्प नेपाल नेटवर्कसँग । हेल्प नेपालले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त दोलखाको राजकुलेश्वर स्कुलको निर्माणमा सहयोगका लागि बेलायतबाट सहयोग रकम उठाउने काम गर्दैै थियो । बेलायतमा साइकल र्याली गरेर पैसा उठाउने कार्यक्रम बनिसकेको थियो । तर, बेलायतमा लगातारको लकडाउनले गर्दा तोकिएको समयमा साइकल र्याली हुन सकेन । दुईपटक र्याली स्थगित भयो ।
यो कुरो थाहा पाएपछि देवेन्द्रले ‘यहाँ पनि त साइकल यात्रा गर्न सकिन्छ’ भन्ने कुरो उठाए । उनी भन्छन्, “हेल्प नेपालको बारेमा मलाई जानकारी थियो । एक–दुईपटक सानो–सानो सहयोगमा म पनि सम्मिलित थिएँ । त्यसैले मैले हेल्प नेपालका अध्यक्ष अरुणसिंह बस्नेतसँग भेट गरेँ । र, बेलायतमा नभए पनि आफूले नेपालमै साइकल यात्रा गर्ने कुरा उठाएँ । किनभने, समाजसेवा रुचाउने मेरा लागि यो एउटा अवसर पनि थियो ।”
त्यसपछि पटक–पटकको बैठक र सर–सल्लाहमा दोलखादेखि दिपायलसम्मको एकल साइकल यात्रा गर्ने तय भयो । यसका लागि देवेन्द्र उत्साहित थिए पनि । शिक्षाका लागि साइकल यात्रा गर्दै आफूले थोरै भए पनि योगदान दिन पाएकोमा उनी खुसी पनि उत्तिकै थिए ।
तोकिएको दिनमा वाङ्मय शताब्दीपुरुषको आशीर्वाद थापेर देवेन्द्र साइकल लिएर दोलखा पुगे । र, निस्किए शिक्षाको उज्यालोका लागि साइकल यात्रामा । एक्लै ।
बाह्रखरी द्वारा प्रकसित पुरा समाचार को लागि तल को लिन्क मा जानु होस :